စောင့်ရှောက်သူများသည် အသည်းကင်ဆာသည်များကို ဘယ်လိုကူညီနိုင်သလဲ - Hello Sayarwon
စောင့်ရှောက်သူများသည် အသည်းကင်ဆာသည်များကို ဘယ်လိုကူညီနိုင်သလဲ
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူများသည် အသည်းကင်ဆာဖြင့် အသက်ရှင်သူများကိုဘယ်လိုကူညီနိုင်သလဲ။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း၏ ၂၀၁၂ တွင်တင်ပြချက် အရအသည်းကင်ဆာသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် သေဆုံးမှု ပေါင်း ၇၄၅၀၀၀ ကိုဖြစ်စေသည်။ အသည်းကင်ဆာကဲ့သို့ ဆိုးရွားသောရောဂါရှိသောချစ်ခင်ရသူတစ်ယောက်ကိုဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ခြင်းသည် အကျိုးလည်းရှိ စိတ်ဖိစီးမှုလည်းများစေသောအတွေ့အကြုံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ် တစ်လျှောက်တွင် သင့်အားအကူအညီ ဖြစ်စေရန် အောက်ပါ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးချပါ။
ကင်ဆာရောဂါရှိသူများသည် သူတို့၏ အားနည်းချက်ကိုဖော်ပြရန်၊ အကူအညီတောင်းရန် ရှက်တတ်ပါသည်။ “မင်းအရမ်းသတ္တိရှိတာပဲ’’ သို့မဟုတ် “မင်းအရမ်းသန်မာတာပဲ’’ ဟုပြောပေးခြင်းသည် သူတို့ စိတ်ဓါတ်ကျနေချိန်တွင် ပို၍ စိတ်ဓါတ်သန်မာစေသည်။
မိသားစုများသည် ကင်ဆာဖြစ်သူအားအချိန်တိုင်းသန်မာစေရန် လိုအပ်ကြောင်း၊မျှော်လင့်ကြောင်းပြောဆိုနိုင်သည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် သင်သည် ကင်ဆာရှိသောသူငယ် ချင်းအတွက် အရေးကြီးသောအခန်းမှ ပါဝင်ပါသည်။ သင့်အားမိသားစုဝင်တစ်ယောက်ကဲ့သို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွယ်တာမှု ရှိချင်မှရှိမည်။ သို့သော်သူတို့သည် သင့်အားကောင်းစွာသိပြီးသင့်အားရင်ဖွင့်နိုင်လောက်အောင် ယုံကြည်နိုင်ပါသည်။
ဖျားနာနေသူများနှင့် ဝေးအောင်နေလိုခြင်းမှာလူ့သဘာဝ ဖြစ်သည်။ ကင်ဆာသည် ကျွန်တော်တို့အားဖျားနာခြင်း၊ အားနည်းခြင်းသေဆုံးခြင်းစသည်တို့ အကြောင်းစိုးရိမ်မှုများကို ဖြစ်စေသည်။ ထိုစိုးရိမ်မှုများသည် ကျွန်တော်တို့အားရောဂါ သည်များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရန် တွန့်ဆုတ်စေပါသည်။ သို့ သော် ကင်ဆာဖြစ်နေသူများကိုတစ်ဦးတည်းထားခြင်းမှာ ပြဿနာအကြီးအကျယ် ဖြစ်စေနိုင်သည်။ မျက်နှာချင်းဆိုင် နိုင်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်ပါ။
သင့်သူငယ်ချင်းသည် ဆေးကုသရန် ပိုက်ဆံသို့မဟုတ် ဆေးဖက်ဆိုင်ရာအသုံးအဆောင်များလိုအပ်ပါကသင်သည် လှူ ဒါန်းသောအဖွဲ့အစည်း၊တစ်စုံတစ်ရာရရန် ရှာဖွေပေးနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ပိုက်ဆံရရန် ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးခြင်းတစ်ခုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အာမခံအပ်မထားသောတစ်စုံတစ်ခုကိုဝယ်ယူရန် သင်သည် စုဆောင်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကင်ဆာရောဂါ သည်နှင့် နီးစပ်သူများသည်လည်းအကူအညီနှင့် ထောက်ပံ့မှု လိုအပ်မည်ကိုသတိပြုပါ။ ကင်ဆာရောဂါသည်ကိုစောင့် ရှောက်ရသောမိသားစုဝင်သည်လည်းစိတ်ဖိစီးပြီးအထီးကျန် မှုကိုခံစားရနိုင်သည်။ ထိုသူနှင့် သင်သိပါကသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ကိုင်နေသည်ကိုသွားရောက်စစ်ဆေးသင့်သည်။ သူတို့ သည် သင့်အားကင်ဆာရောဂါသည်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ် အောင် ကူညီနိုင်သောအကြံညဏ်များကို မျှဝေနိုင်သည်။
မျှဝေခြင်းသည် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါသည်။ သင့် သူငယ်ချင်းအားတတ်နိုင်သလောက် ပုံမှန်အတိုင်းဆက်ဆံ ပါ။ သူတို့ ဘယ်လောက်ထိန်းချုပ်နေပြီးဘာတွေ လိုအပ်သည် ကိုဆွေးနွေးပါ။ သို့သော် ကင်ဆာအကြောင်းအမြဲတမ်းပြောနေရန် မလိုအပ်ပါ။ သူတို့ကိုလှုပ်ရှားမှုများ နှင့် လူထုပါဝင်သောပွဲများသို့ ဖိတ်ခေါ်ပါ။ သူတို့ တစ်စုံတစ်ခုကိုမလုပ် လိုပါကသူတို့အားကိုယ်တိုင် မလုပ်ဘူးဟုပြောဆိုစေပါ။ သူတို့ ပါဝင်ဆင်နွဲနိုင်သလားမေးမြန်းပါ။ ဘယ်အရာကအကူအညီအဖြစ်ဆုံးလဲဆိုသည်ကိုသင့်အားပြောဆိုစေပါ။ အကြံညဏ်အချို့ကိုအောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အစားအစာတစ်ခုကိုပို့ပေးပါ သို့မဟုတ် ပြင်ဆင် ချက်ပြုတ်ပေးပါ။ အစားအစာပို့မှု အစီအစဉ်တစ်ခု ပြုလုပ်ပါ။
ကလေးစောင့်ရှောက်မှုဖြင့် ကူညီပါ။ နေ့ပိုင်းစောင့် ရှောက်မှု အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ပါ။
ကုသရန် ချိန်းဆိုထားသည့်နေရာသို့ အသွားအပြန် လိုက်ပို့ပါ။
သင့်သူငယ်ချင်းသည် မောပန်းနွမ်းနယ်ပြီးအနားယူရန် လိုအပ်ပါကဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုလုပ်ဆောင်ပေး ပါ။
အုပ်စုလိုက် သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်း၊ ပိုစ့်ကတ်များ၊ ပန်းများနှင့် လက်ဆောင်များပို့ပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေး ပါ။
သက်ဆိုင်ရာ လှူဒါန်းမှုများ၊ သွေးလှူခြင်းများတွင် သင့်သူငယ်ချင်းနာမည်အားထည့်၍ လှူဒါန်းပေးပါ။
သူတို့ခံစားနေရသောကင်ဆာ၏ မရှင်းလင်းသောအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေလေ့လာ၍ အကြံပြု ပေးပါ။
ခွင့်ပြုပါကကုသမှုပြီးဆုံးသည့်နောက် သို့မဟုတ် နှစ် ပတ်လည် နေ့များတွင် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများစီစဉ်ပေးပါ။ ကင်ဆာရောဂါသည်အားပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအစီအစဉ်များမလုပ်မီအသိပေးပါ။ ဖိတ်ခေါ်မည့်လူများ၏ စာရင်းကိုလည်း ပြပါ။
သင်သည် သင်၏မိတ်ဆွေတွင် အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်သည် ဟုသိရှိပါကသူ့အတွက် ဝမ်းနည်းပူဆွေးနိုင်သည်။ သို့သော်ကင်ဆာ၏ ဆက်စပ်သောရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာရန် နည်းလမ်းပေါင်းများစွာရှိပါသည်။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပြီးသင့်မိတ်ဆွေအားရောဂါအခြေအနေတိုးတက် စေရန် ကူညီဖို့ပဲဖြစ်သည်။
Caregiver tips.http://cancer.ucsd.edu/coping/resources-education/Pages/caregiver-tips.aspx. Accessed February 16, 2017.
Cancer. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/. Accessed February 16, 2017.